1756-IF16 एलन ब्राडली, आपूर्तिकर्ता - चीन - HuiTong उद्योग कम्पनी लिमिटेड
घर > उत्पादनहरू > Rockwell स्वचालन > एलेन ब्राडली पीएलसी > 1756-IF16
1756-IF16 एलन ब्राडली
ब्राण्ड:Rockwell स्वचालन एलेन ब्राडली
सर्त:नयाँ नयाँ, कारखाना सील
विवरण:ControlLogix १ P Pt A / I Module
वारेन्टी:१२ महिना विश्वव्यापी रूपमा
एलेन-ब्राडली १556-IF16 एक गैर-पृथक एनालग वर्तमान / भोल्टेज I / O मोड्युल हो। कन्ट्रोललोगिक्स चेसिसमा जडान गर्नको लागि, १556-IF16 लाई १ R56-TBS6H वा १556-TBCH को लागि एक RTB वा हटाउन योग्य जctionक्शन बक्स घेरा आवश्यक छ। इनपुट मोड्युलमा १ available उपलब्ध पोइन्टहरू छन्। अन्य मोड्युलहरूको विपरीत, १556-IF16 ले प्रयोगकर्ताहरूलाई मोड्युलहरू बिभिन्न तरिकाहरूमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ।
१556-आईएफ १ प्रयोगकर्ता र अनुप्रयोग आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दै तीन फरक तरिकामा तारहरू लिन सकिन्छ: एकल-अन्त्य गरिएको तारि,, विभेदक तारि,, र उच्च-गति मोड भिन्नता तार। जब सबै इनपुट उपकरणहरू ग्राउन्ड हुन्छन्, एकल-अन्तित तारि used प्रयोग हुन्छ। यो संकेत इनपुटको पक्ष र सिग्नल ग्राउन्ड बीचको भिन्नता तुलना गर्न हो जुन मोड्युलले नियन्त्रणरको लागि डिजिटल डाटा उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्दछ। १ single एकल-अन्तित तारि complete पूर्ण गर्न सक्दछ। जब एप्लिकेसनको साझा आधार छैन वा अलग सिग्नल जोडीहरू हुन सक्छ, एक भिन्न वायरिंग विधि सिफारिस गरिन्छ। यो तारिंग विधि वातावरणको लागि उपयुक्त छ जहाँ ध्वनि प्रतिरक्षा सुधार गर्न आवश्यक छ। भिन्न मोडमा च्यानलहरू एक अर्काबाट पूर्ण रूपमा पृथक हुँदैनन्।
1756-IF16 सन्दर्भ मामिला:
यदि बहु विभेदक इनपुट स .्केतहरूको फरक भोल्टेज सामान्य सन्दर्भ छ भने, एउटा च्यानलले अर्को च्यानलको पठनलाई असर गर्न सक्छ। जब यो हुन्छ, प्रयोगकर्ताले इनपुटलाई भिन्न मोड्युलमा जडान गर्नुपर्दछ वा गैर-पृथक मोड्युललाई पृथक इनपुट मोड्युलसँग बदल्नु पर्छ। 1756-IF16 यस मोड मा आठ कनेक्शन को अनुमति दिन्छ। अन्तमा, उच्च-गति मोड विभेदक तार विधिले डेटा अपडेट महसुस गर्न सक्दछ। जे होस्, प्रयोगकर्तासँग उच्च-गति मोड प्रयोग गर्न केहि शर्तहरू हुनुपर्दछ। पहिले, यसले विभेदक तारिंग विधि प्रयोग गर्दछ। दोस्रो, यस मोडमा, मोड्युलमा प्रत्येक चार च्यानलहरू मध्ये एउटा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
१556-IF16 मोड्युलको उर्जा उपभोग २.3 वाट छ, र ब्याकप्लेनको जम्मा पावर २.33। वाट छ। इनपुट दायरा ± १० भोल्ट हो, ० देखि १० वोल्टसम्म, ० देखि vol भोल्ट, वा ० देखि २० एमए। मोड्युलको वर्तमान रेखाचित्र is हो। १ वी १ 150० एमए हो, वा २ V भि 65 65 एमए हो। ब्याकप्लानको भोल्टेज र वर्तमान रेटिंगहरू DC .1.१ भि, अधिकतम १ m० एमए, अधिकतम डीसी २ V वी, m m एमए हो। इनपुट हालको दायरा to देखि २० एमए छ, इनपुट भोल्टेज दायरा -१० देखि १० V छ, र यो १००VA मा सीमित छ। भोल्टेज पावर खपत करीव २.3 वाट छ र हालको उर्जा खपत 3..9 वाट छ।
१556-IF16 भोल्टेजको heat.8484 BTU / घण्टा र १ heat..3 BTU / घण्टाको वर्तमान ताप तापक्रम छ। योसँग V० वी डीसी (भोल्टेज) र V भी डीसी (हाल) सम्म ओभरभोल्टेज सुरक्षा पनि छ। भोल्टेज पावर खपत करीव २.3 वाट छ र हालको उर्जा खपत 3..9 वाट छ। भोल्टेजको तातो dissipation 7.84 BTU / घण्टा छ र वर्तमान 13.3 BTU / घण्टा छ। १556-आईएफ १ सँग v० वी डीसी (भोल्टेज) र V भी डीसी (हाल) सम्म ओभरभोल्टेज सुरक्षा पनि छ। भोल्टेज पावर खपत करीव २.3 वाट छ र हालको उर्जा खपत 3..9 वाट छ। भोल्टेजको तातो dissipation 7.84 BTU / घण्टा छ र वर्तमान 13.3 BTU / घण्टा छ। योसँग V० वी डीसी (भोल्टेज) र V भी डीसी (हाल) सम्म ओभरभोल्टेज सुरक्षा पनि छ।
औद्योगिक स्वचालन उत्पादनहरूको लागि १० बर्ष भन्दा बढी निर्यात अनुभव!
कहिल्यै बिक्री भाँचिएका पार्ट्स हाम्रो मिशन हो! हामी यो मिसन लिइरहेका छौं र यसलाई सँधै कार्यान्वयन गर्न जारी राख्छौं!
१००% पूर्ण नयाँ मूल कारखानामा छाप लगाइएका भागहरू।
स्टक मा हजारौं पार्ट्स!
W गोदामहरू र सुरक्षा स्टक २. million मिलियन अमेरिकी डलर एलेन ब्राडली पार्ट्स!
हट ट्यागहरू: १556-IF16 एलन ब्राडली, आपूर्तिकर्ता, थोक, खरीद, चीन, कम मूल्य, मूल्य सूची, उद्धरण
एलेन ब्राडली 1756-IF16Rockwell स्वचालन 1756-IF16